Ny sandan'ny marketing amin'ny atiny | Martech Zone
Alakamisy, Jolay 7, 2011 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Ity dia fijery tokana amin'ny marketing amin'ny atiny. Nozarainay ny Grid amin'ny atiny omaly, miresaka momba ny fomba fampiasana ny karazana atiny tsirairay azo ampiasaina stratejika. Ity infographic ity dia mitaky paikady matanjaka kokoa satria miova ny fitondran-tenan'ny mpamaky… manjary miahiahy sy mitandrina kokoa.
Per the Alinean Infographic: ny fahazoana miverina amin'ny fampiasam-bola amin'ny marketing dia mitaky paikady mifandraika, mihantsy ary manome lanja bebe kokoa mba hahafahana miady amin'ny Frugalnomics ™ - mampifandray, mandray anjara ary mivarotra an'ity karazana mpividy vaovao ity.
Tags: alineanteti-bola marketingafa-po paikadyatiny mifantokamihantsyfiverenana amin'ny fampiasam-bola atinysarobidy